Ukunciphisa ingcindezi yamanzi → Ngabe isebenza kanjani? • Ukuhlanza kanjani? • Ungabeka kanjani?
Umthamo wokucindezela kwamanzi
Umfutho wamandla wokunciphisa amanzi, umthetho onesihlungi kanye negeji yokucindezela. Izinguquko zokucindezela amanzi okwenzeka ohlelweni lwamanzi kuvame ukuholela, phakathi kwabanye, kusuka ohlelweni lwamanzi olwakhiwe ngokungeyikho noma kwenzeka ebusuku, lapho ukuphuza kwamanzi okuncane kubangela ukwanda kwengcindezi yayo emaphayipini, okungalimaza uhlelo namadivayisi axhunyiwe kuwo, futhi kuveze umsebenzisi ngezindleko ezingadingekile.
Ukufaka isinciphisi sokucindezela kwamanzi izonciphisa ingcindezi ephezulu yokuhlinzekwa ngamandla, igcine ingcindezi yesistimu ihlala njalo, futhi uma kwenzeka ukuguquguquka kwengcindezi yokungena, isize ukonga amanzi ngokuvimbela ukuhamba kwawo ngokweqile, kuqede ingozi yesando samanzi futhi kunciphise umsindo nemisindo ekhiqizwa ngesikhathi sokusebenza kohlelo lwamanzi.
Abalawuli bezingcindezi zamanzi babekwa ngemuva imitha yamanzi i isihlungi samanzi ngentambo yamandla eyinhloko. Zingafakwa futhi ezindaweni ezifakwe kumapayipi e-hetertha namathangi, noma kunjalo, lesi sixazululo sisetshenziswa kuphela uma ukufinyelela kokuxhumeka okukhulu kungeke kwenzeke.
Ifakwe ngaphambi nangemva komlawuli ukuvala ama-valve, inika amandla ukusetha kwayo kanye nokunakekelwa okulandelayo. Idivayisi ifakwe ngokuthe nkqo.
Bheka futhi: Amandla kagesi
Isilinganiso sokunciphisa amanzi singafakwa ezindaweni ezihlukile zohlelo lwamanzi:
umhlangano omkhulu - ngemuva kwemitha yamanzi, i-valve enkulu futhi hlunga ngentambo yamandla eyinhloko. Ngesikhathi sokufaka, khumbula ngesigaba sokuhamba sokuthula esingemva kwesilawuli futhi ngokufaka i-Administrator ngemuva kokushayela uhlelo. Ukubeka ingcindezi eyisisekelo yohlelo lonke kusindisa amanzi.
umhlangano ohlikiwe - emigqeni yokuhlinzekwa kokushisa kwamanzi okuvaliwe namathangi okugcina, lapho inhloso yokufaka isinciphisi sokucindezela kwamanzi ukugwema ukuvula i-valve yokuphepha uma kwenzeka ukuguquguquka kwengcindezi yokusebenza. Lokhu kuvumela imvamisa ye-heater activation ukuthi incishiswe.
phazamisekile - kuphela endaweni yokufaka i-boiler nangokusetshenziswa ngasikhathi sinye kwamakhanda nama-thermostats. Lapha kungavela isimo sebhuloho lengcindezi, esizodala ukuvulwa kwevalvu yokuphepha. Kulokhu, izinciphisi zengcindezi kufanele zilawule ukuhamba kwamanzi ashisayo nabandayo.
- ezinhlelweni zokuphakelwaisb. ezakhiweni eziphakeme kakhulu, ngezinhlelo zokunyusa ingcindezi lapho kudingeka khona izindawo zokucindezela eziningi. Izithako zokunciphisa amanzi zisetshenziswa lapho ingcindezi yokuphumula ohlelweni idlula ibha engu-5 noma lapho ingcindezi yokuphumula ephakeme ye-valve yokuphepha (isb. Ihekitha lamanzi) idlula i-80% yengcindezi yayo yokuvula.
Umfutho wamanzi ngamapayipi kufanele uguqulwe ukuze ukwazi ukusebenza kwamadivayisi nezinhlelo ezifakiwe ekufakweni kwamanzi. Umfutho wamanzi uphezulu kakhulu kungadala ukulimala noma ukungasebenzi kahle kohlelo, ngakho-ke kufakwa isitholi sokunciphisa ingcindezi emanzini ohlelweni lwamanzi.
Isici esisebenzayo sokunciphisa ngakunye kuyinto ekhethekile ulwelwesi unesibopho sokunciphisa ukuthi ingcindezi yamanzi isebenza kanjani ohlelweni lwamanzi.
Lapho iqhuma lamanzi liqine kakhulu ulwelwesi ku reductor, intwasahlobo iyaphakanyiswa, ekhulisa uphawu futhi ivumela ukucindezelwa kwamanzi okudingekayo kutholakale. Lapho ingcindezi lehla ngaphansi kweleveli ebekiwe, intwasahlobo iyehla, okuvumela ukuthi amanzi ageleze.
Kunezixazululo ezahlukahlukene, ezivame kakhulu eziyinkimbinkimbi ezisetshenziswa emakethe kepha ngokuhlaziya rumgomo wokusebenza kwengcindezi eductor ngalinye aliguquki: idayaphragm, uphawu ne-valve zisebenza ndawonye ukugcina ingcindezi yokuphuma isezingeni eliphephile.
Imvamisa, ukuthengwa kwesinciphisi sokucindezela kwamanzi kuba yisidingo, ngoba ukusetshenziswa kwaso kuvikela uhlelo lwamanzi ekuhlulekeni okubangelwa yingcindezi ephezulu kakhulu futhi kuyindlela yokunciphisa ukulahleka kwamanzi ohlelweni.
Bheka futhi: Ukuthambisa kwamanzi
Kusetshenziselwa ukuncishiswa kwengcindezi yamanzi lapho:
ingcindezi yokusebenza kwesistimu idlula inani elivumelekile
ingcindezi ephakeme ye-valve yokuphepha idlula ama-80% omfutho wokuvula i-valve
ukusetshenziswa ngezikhathi ezithile kokufakwa kungafaka ubungozi bokweqile kwesikhashana
ingcindezi yokuphumula ekufakweni idlula ibha engu-5
Abalawuli bezingcindezi zamanzi bayafiseleka lapho ingcindezi yenethiwekhi ekhona (Ukuhlinzekwa kwamanzi) iphakeme kakhulu isitshalo noma imishini noma ingaphansi kokuguquguquka ngezikhathi ezithile.
Bheka futhi: Guqula i-osmosis
Ngokuthengisiwe ungathola amadivayisi wemiklamo ehlukahlukene futhi enziwe ngezinto ezahlukahlukene:
I-Cartridge (cartridge) ehlisayo inomzimba wethusi oxhumene ne-cartridge eyicezu elilodwa elinesihlungi se-mesh nophawu. Lo mklamo uvumela ukuthi okufakwayo kususwe ngemeshini yokuvikela yokuhlanza. Yonke imishini yokunciphisa umfutho wamanzi ingaphakathi kwebhokishi ngakho-ke ukugcinwa ngeke kushintshe ukulungiswa kwengcindezi.
insimbi engenasici amelana kancane nezinqubo zokugqwala kunokwehlisa ithusi. Lezi zokugcina zibiza kakhulu, kepha zizosebenza kangcono ngokusetshenziswa kwamanzi okuphezulu.
I-1 intshi yokunciphisa amanzi, i-¾ reducer noma i-1/2 yokunciphisa ingcindezi yamanzi ikhethiwe ngokuya ngobubanzi bepayipi yokunikezela. Ukuqina kwama-minimers amancane kuyafana kwabakhulu, futhi kukhethwe kahle kuzohlala iminyaka ethile.
ingcindezi yokucindezela kwamanzi ngesihlungi yisisombululo esihle kakhulu ekufakweni ngaphandle kwezinye izihlungi. Isihlungi ngasinye esisetshenzisiwe sivikela ukufakwa kumonakalo owenziwe ngemishini futhi noma ngabe sonakele, ukufakwa kwe-kunciphisi kulula kakhulu futhi kushibhile kunokukhipha ukwehluleka ekufakweni kwamanzi konke noma ukufaka amanye amadivayisi asebenza kuwo. Kubalulekile ukuthi ukuhlanza okujwayelekile kwenziwa ngenethiwekhi yokuhlunga efakwe enhla yomthamo wokucindezela kwamanzi.
ingcindezi yokucindezela kwamanzi nge-pressure gauge eyakhelwe ngaphakathi noma engaphandle yenza kube lula ukuyisebenzisa futhi ikhulisa ukusebenziseka kalula kohlelo lwamanzi, inikeze ukufundwa okusheshayo kwengcindezi yoqobo ohlelweni lwamanzi.
ingcindezi yokucindezela kwamanzi ngesihlungi kanye negeji yokucindezela Isixazululo esibanzi futhi kulula kakhulu ukusisebenzisa.
Amamodeli we-cheaper we-Administrators anengcindezi esethwa efektri. Uma ukhetha isinciphisi esibiza kakhulu samanzi, ungaguqula futhi uguqule amapharamitha edivayisi ngesandla.
Bheka futhi: I-Poidełko
4.8 / 5 ( 28 amavoti )
ingcindezi yokunciphisa amanzi i-castoramaukuthi isinciphisi sokucindezela kwamanzi sisebenza kanjaniindlela yokuhlanza isinciphisi samanziukuthi ungalungisa kanjani isinciphisi sokucindezela kwamanziungayifaka kanjani isinciphisi sokucindezela kwamanziyini ingcindezi yokunciphisa amanziingcindezi yokunciphisa amanziingcindezi yokunciphisa amanziingcindezi yokunciphisa amanzi 1 inch1/2 ingcindezi yokunciphisa amanzi1/2 intshi ingcindezi yokunciphisa amanzi2-intshi yokucindezela kwamanzi okuyi-intshi3/4 ingcindezi yokunciphisa amanziI-3/4 ingcindezi yokunciphisa amanzi nge-shinikizo gaugeingcindezi yokunciphisa amanzi ye-castoramaintengo yokunciphisa ingcindezi yamanziyokuhlanza ingcindezi amanziukucindezela kokucindezela kwamanzi kunciphisaingcindezi yokunciphisa amanzi i-herzingcindezi yokunciphisa amanzi i-herzisisindisi sokucindezela kwamanzi i-honeywellibhuku lamanzi lokunciphisa ingcindezi yamanzi e-honeywellIncwajana yemiyalo yokunciphisa ingcindezi yamanziukuthi isinciphisi sokucindezela kwamanzi sisebenza kanjaniingcindezi yokunciphisa amanzi ukuthi ungayilungisa kanjanikanjani ukusetha isinciphisi sokucindezela kwamanzileroy merlin ingcindezi yokunciphisa amanziingcindezi yokunciphisa amanzi i-obiukulungiswa kwengcindezi yokunciphisa amanziingcindezi yokucindezela kwamanzi ngesihlungiingcindezi yokucindezela kwamanzi ngesihlungi kanye negeji yokucindezelaingcindezi yokucindezela kwamanzi nge-pressure gaugeumgomo wokunciphisa ingcindezi yokusebenza kwamanzi
Bona ezinye izindaba:
Idivayisi yamanzi e-gassing
Iziphuzo zokuphuza amanzi